तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का - कान्तिपुर समाचार
तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का
तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्काका लेखहरु :
चैत्र १, २०७८
काठमाडौं उपत्यकाको सौन्दर्य मान्छेको भीड, बेढंगका बग्रेल्ती घर, बाँगाटिंगा बाटा र कुरूप संरचनाहरूले मिचिएको छ । एक समय देवस्थलका रूपमा परिचित उपत्यकाको आभा मन्दिरहरू, देवल र कलात्मक ढुंगेधाराहरूले निखारेको थियो । तर बढ्दो जनघनत्व र अव्यवस्थित बस्ती विस्तारको मारमा सहर बिस्तारै कुरूप बन्दै गयो । जमघट हुने, जात्रा र पर्वसँग प्रत्यक्ष साइनो भएका र ढुंगेधाराहरू अतिक्रमणको सिकारमा पर्दै गए ।
जहरसिंहपौवाबाट देखिएका हिमाल
असोज/कात्तिक मौसम खुल्ने समय । जाडो पनि सुरु हुने समय । यहीबेला उपत्यकाबाट उत्तरतिर हिमालहरू छर्लंगै देखिन्छ । उपत्यकामा वायु प्रदूषण नहुँदो होस् त हिमाल अझै टल्किन्थे । उपत्यकाबासीले नजिकैबाट हिमाल नियाल्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । नगरकोट, रानीकोट, सूर्यचौर, जहरसिंहपौवा, चन्द्रागिरी वा नजिकको हिल स्टेसनबाट हिमाल हेरेर आनन्द लिन सकिन्छ ।हेरौं काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा रहेको जहरसिंहपौवाबाट देखिएका हिमाल र त्यहाँको जीवनशैली ।
असनमा किनमेलको घुइँचो [तस्बिरहरु]
दसैं सुरु भएसँगै काठमाडौं असन बजारमा पनि मानिसको भीड बढेको छ । त्यहाँ शनिबारको भीड देख्दा मानिसले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बिर्सिसकेको आभाष हुन्थ्यो । भीडभाड भए तापनि व्यापारीहरू सोचेअनुरूप कारोबार नभएको बताउँछन् ।
जर्जर बन्यो देशकै पहिलो विज्ञान क्याम्पस [भिडियो]
अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) देशको पहिलो विज्ञान विषय अध्ययन गराउने क्याम्पस हो । विज्ञान विषयमात्र पढाइने यो देशको एउटा मात्रै क्याम्पस पनि हो । यो क्याम्पस २०१३ साल असोज १ गते स्थापना भएको हो । हाल क्याम्पस स्थापना भएको ६५ औं वर्ष पुगेको छ ।
चुरा पोते व्यापारमा छैन उत्साह [तस्बिरहरू]
तीजको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंको इन्द्रचोकस्थित चुरा पोते बजारमा तीजको अघिल्लो दिन चहलपहल कम देखियो । कोरोना महामारीका कारण यहाँको पोते बजार अघिल्लो वर्षभन्दा केही चहलपहल देखिएपनि व्यापारीहरुमा कुनै उत्साह छैन । तिजमा विवाहित महिलाहरुका लागि चुरा र पोतेले विशेष महत्त्व राख्दछ ।
बैंकेश्‍वरबाट यमलोक हुँदै नेवारबहादुर र बाहुनबहादुर...
सहकार्य र सहयात्राको ४१ औं वर्ष । यो जोडीले पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र देख्यो । रंगमञ्चमा जन्मिएका यी दुईले एकअर्काका हात समाएर यात्रा सुरु गरे । उनीहरुको सहकार्य साथ, भरोसा र विश्वासबाट सुरु भयो । उदाहरण बने असल मितत्राको, अनि बलियो साथको । यी दुई परिवर्तनका वाहकमात्र बनेनन् हास्यव्यंग्यको नबिर्सने इतिहास बने । दर्शकको ताली र हाँसोमा जन्मिएको यो जोडी हो 'मह' ।
कचौराबाट 'सरगम' का सुर निकाल्ने निरन [भिडियो]
सिसा या माटोको भाँडा देख्ने बित्तिकै निरन श्रेष्ठको हात चलमलाई हाल्थ्यो । सानो लठ्ठीले ट्वाङटुङ हान्थे, भाँडोको आवाज सुन्न । एकदिन आफ्नो कपडा पसल छेउको दोकानबाट चिया मगाएर पिउँदै थिए ।
मनाइयो घण्टाकर्ण पर्व [तस्बिरहरु]
श्रावण २२, २०७८
कोरोना संक्रमण बढिरहेकै बेला भक्तपुरमा भने घण्टाकर्ण पर्व मनाइएको छ । यो पर्व उपत्यकाभरि मनाइन्छ । घण्टाकर्ण चतुर्दशीलाई गथामुंगः च:हे भनेर चिनिन्छ। साउन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्व परापूर्वकालदेखि नेवार समुदायले मनाउँदै आएका छन् । गोपाल वंश अनि लिच्छवि वंशदेखि यो पर्व मनाइँदै आइएको हो ।
खोप लगाउँदैमा तेस्रो चरण रोक्न सकिन्छ भनेर भ्रम पाल्नुहुन्‍न : डा. शरद वन्त
श्रावण १९, २०७८
केही दिनयता नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमित हुने संख्या बढ्न थालेको छ । संक्रमितको संख्या बढेसँगै यो तेस्रो लहरको सुरुवाती चरण हो या दोस्रो चरणको निरन्तरता नै हो भनेर पनि बहस सुरु भएको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा अहिले भेरोसेल र जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप लगाउने कार्य पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था र सम्भावित तेस्रो लहरको प्रभावका बारेमा जनस्वास्थ्यविद् प्रा. डा. शरद वन्तसँग ईकान्तिपुरकी बुनु थारुले गरेको कुराकानी :
बेलायतबाट अकाउन्टेन्सी पढेर फर्किंदा विराज खड्कामा केही नयाँ गर्छु भन्ने हुटहुटी थियो । तर, के गर्ने मेसो पाइरहेका थिएनन् । फर्किएकै वर्ष सन् २०१२ मा नयाँ व्यवसायका लागि विभिन्न क्षेत्रमा हात हाले । तर, उनलाई सन्तुष्टि मिलिरहेको थिएन । कहिले झोला ब्यान्ड प्रोजेक्ट त कहिले कर्पोरेट गिफ्टस बनाउने काम । उनकै शब्दमा ती कामले केही ‘क्लिक’ भइरहेको थिएन ।